अध्यारोमा बिरालोको आँखा किन चम्किन्छ ?
काठमाडौं, मङ्सिर १० गते । के तपाईले राति बिरालोलाई हेर्नुभएको छ ? अध्यारोमा बिरालोको शरीर त देखिन्न । तर उसको आँखा चम्किएको भने प्रष्ट देखिन्छ । बिरालो झैं केही अन्य जनावर चितुवा, बाघको आँखा समेत अध्यारोमा चम्किन्छ । कारण के हो त ?